औषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ ख:तरनाक बन्नसक्छ ! – List Khabar
Home / Uncategorized / औषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ ख:तरनाक बन्नसक्छ !
औषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ ख:तरनाक बन्नसक्छ !
admin December 15, 2021 Uncategorized Leaveacomment 277 Views
औ,षधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ खतरनाक बन्नसक्छ !
हामीलाई थाहा छ कि डा,क्टरको सल्लाह बिना औ,षधि खानु हुँदैन तर सामान्यतय टाउको दु,खेदेखि झाडावान्ता हुँदा भने कुन औ,षधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘क,न्ठ जस्तै भइसकेको हुन्छ
यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औष,धि खाने गरेका छौँ । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् । हामीमध्ये कतिपयले याद गरेका हुँदैनौं कि कुनै औषधिमा विशेष संकेत पनि हुन्छ भनेर ।
तपाईंले एकप्रति ट्याब्लेट औषधिको पछाडि हेर्नुभयो भने अधिकांशमा रातो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, दु:खाइ कम गर्ने क-डा औ’षधि र एन्टिबायोटिक्समा विशेषगरी यस्तो संकेत कोरिएको हुन्छ ।
नोट :Nepal viral news मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
Previous जाने होईन त माल्टा ! तलब २ लाख ८२ ह’जारसम्म,सेवा शूल्क ४० हजार मात्रै, १२ पदका लागि ५८ जनाको माग
Next भोलि देखि लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने देउवाको घो:षणा